July Dream: 20082008
အံ့ပါရဲ့။ PR တင်ဘို့ ဒီလောက်တောင် တန်းစီရတယ်ဆိုလို့။ အဲဒီနေ့က စောစောသွားလည်း တင်ဘို့ Q နံပါတ်ရမယ် မထင်ဘူးနော်။ အတွေ့ အကြုံလေး ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပဲ ကိုဂျူလိုင်ရေ။
၂၀၀ဂ၂၀၀၈ ကို သတိမပြူမိလိုက်ဘူး စိတ်မကောင်းစရာ.တနေ.တနေ. အလုပ် အလုပ် အလုပ် ပြီးရင် ဘလော. ဘလော.. လောကကြီးနဲ.ကင်းကွာနေရဲ.
နောက်တခေါက်သွားရင် စောစောထ သွား တို.ဆိုရင် ရ နာရီထည်. ကရောက်ပြီး တန်းစီနေပြီး တနေ.ထည်.ပြီးတာပေါ. မဟုတ်ရင် နောက်တနေ.ထက်ချိန်းနေဦးမယ်။
အခုနောက်ပိုင်း စောစောထ တန်းစီလည်း တိုကင် မရတော့ဘူးလို့ ကြားမိတယ်။ e-Appointment မလုပ်ရင် မရတော့ဘူးတဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ e-Appointment မယူထားရင် မရပါဘူး။ ကိုယ်က Appointment မယူထားပဲ တန်းစီရင် ဟိုက လုပ်ပေးမှာက Appointment ပါပဲ။ Q နံပါတ်ကို ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ တစ်ရက် အချိန်ကုန်ခံပြီး သွားတန်းစီ မနေပါနဲ့တော့။ ICA ဆိုဒ်ကနေပဲ e-Appointment ပဲ လုပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါမယ်။ ကိုယ် လုပ်ထားတဲ့ Appointment Date ရောက်မှပဲ ရုံးကို သွားတာ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ ခင်ဗျာ။